२६ असार - अन्तराष्ट्रिय श्रमबजारमा जाँदा महिलाहरु अन्य देशकै महिला कामदारकै सीप र क्षमताको आधारमा जान सक्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने न्यूनतम पहल पनि भएको छैन। घरेलु कामदारका लागि कुनै क्राइटएरिया नै छैन।
२५ असार - तेस्रो चरणको चुनाव भयो वा संविधानमा सानोतिनो संशोधन (झुक्याउनका लागि गरियो) भने पनि त्यसले समस्याको समाधान गर्दैगर्दैन। मधेसमा मानिसहरू अर्को ठूलो शक्तिको निर्माणमा लागिरहेका देखिन्छ। स–साना विभिन्न समूहहरू निर्माण भइरहेका छन्, जसरी ०६२–६३ सालको मधेस आन्दोलनभन्दा अगाडि फोरमका विभिन्न समूहहरू...
२४ असार - नेपालखबर अनलाइन पत्रिका आज शनिबारबाट दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो अवधिमा हामीले नयाँ खबर, विश्लेषण र गम्भीर विषयका सामाग्री बाँड्ने प्रयास गरेका छौँ। पाठकबाट हामीले धेरै सुझाव र प्रतिक्रिया पाएका छौँ, जसले हामीलाई थप सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने शक्ति दिएको छ।
८ असार - तीनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा (पूर्वमा भुटान, पश्चिममा नेपाल, दक्षिणमा बंगलादेश र उत्तरमा केही पर चीन) रहेको यो संवेदनशील भूगोललाई नाजुक अवस्थामा राखिछोड्न सकिन्न। भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको पूरै कनेक्टिभिटी यही जिल्लामा भएको ‘चिकेन नेक करिडोर’ भएर जान्छ। वास्तवमा यही जिल्लाले ती तीन देशलाई...
हजार वर्षदेखि लडिरहेको छ मधेस
६ असार - नान्यदेवको पालादेखि पृथ्वीनारायण शाहको उदय हुनुपूर्वसम्म तिरहुत र नेपाल उपत्यकाबीच संघर्ष चलिरह्यो। यो संघर्षको बीचमा पश्चिमको खस राज्यले नेपाल उपत्यकाको राजगद्दीधारी ‘मल्ल’हरूलाई सहयोग गरे। खसहरूले मल्लहरूलाई सहयोग गर्नुको निहितार्थ नेपाल उपत्यकामा तिरहुतीयहरूको नामोनिसान मेट्नु नै थियो। जब–जब...
नेपाल-अध्ययनमा 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तर' भनेको के हो?
६ असार - नेपालमा बेलाबेलामा हुने बहसहरूमा अक्सफोर्डमा यस्तो–यस्तो हुन्छ, हामीले नेपालमा यस्तो गर्न सकेका छैनौं भन्ने खालका बहस सुन्न पाइन्छ। अथवा अक्सफोर्ड, हावर्ड, लण्डन आदि अन्तर्राष्ट्रिय भनिने ठाउँ वा विश्वविद्यालयमा जो छन्, ती सबै अन्य ठाउँमा छन्, यहाँ चाहिँ छैनन् भन्ने बहसले हामी साह्रै पीडित छौं।
तथ्याङ्कमा यस्तो छ तराई–मधेस
३१ जेठ - तराईका जिल्लाबाट प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट रोयल्टी अन्य जिल्लाभन्दा अपेक्षाकृत कम रहेको छ। जल–सम्पदा जसलाई ‘सेतो सुन’ भनिन्छ। त्यसको स्रोत हिमाली र पहाडी जिल्लामा नै रहेको र जलविद्युतबाट प्राप्त हुने र भई रहेको रोयल्टी ती जिल्लामा मात्र रहेको देखिन्छ। कोशी नदीको जल सिंचाइँको रूपमा नेपाली भूमिबाट...
चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख दलका रङ्गीन सपना
२६ जेठ - स्थानीय विकासका नाममा रेल कुदाउने सपना बाँड्नु कति उचित हुन्छ? कर्णालीको सिमिकोट गाउँपालिकाले कहाँदेखि कहाँसम्म रेल मार्ग बनाउने? काठमाण्डूमा चालु अवस्थामा रहेको ट्रली बसका तारसमेत झिकेर फाल्ने राजनीतिक दलहरूले यहाँ भूमिगत रेल बनाएर चलाउँछन् भनेर नेपाली जनताले विश्वास गर्ने आधार के छ? बरू स्थानीय...
२५ जेठ - चीन स्वाधीन भएको दुई चार महिनामै तिब्बतमा लालसेना आइपुग्यो। लालसेना तिब्बत पुगेको मितिको अघिल्लो दिनसम्म नेपाली कांग्रेसको गतिविधि र लालसेना त्यहाँ पुगेपछिको गतिविधिमा फरक देखिन्छ। तिब्बतमा लालसेना आइसकेपछि भारत सरकार चीनलाई नेपालसम्म आउन दिनु हुँदैन भन्ने निर्णयमा पुग्यो। उनीहरूले नेपाली...